စီးပွားရေး ဥပဒေများ | Myanmar Law Center
Home | စီးပွားရေး ဥပဒေများ
စီးပွားရေး ဥပဒေများကို ဤနေရာတွင် စုစည်း တင်ပြထားပါသည်။
Asean Free Trade Agreement (AFTA) Click here to Downlaod
Myanmar Companies Law 2017: Contents
TABLE OF CONTENTS PART I – PRELIMINARY ........................................................................................................................ 1 Division 1: Citation, commencement and definitions...
2015-12-22 – မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆၈။) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ...
2015-12-22 – နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆၇။) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု...
2014-01-23 – ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ (၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၁။) ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၈ ရက် (၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်...
2013-03-22 – အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဥပဒေ
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဥပဒေ (၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၇။) ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၁ ရက် (၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်) နိဒါန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်...
ကွန်ပျူတာပညာ ဖွံ့ဖြိုး‌ရေးဥပ‌ဒေ (နိုင်ငံ‌တော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်‌ဆောက်‌ရေးအဖွဲ့ ဥပ‌ဒေအမှတ် ၁ဝ/၉၆) ၁၃၅၈ ခုနှစ်၊ ‌တော်သလင်းလဆန်း ၈ ရက် (၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်) နိုင်ငံ‌တော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်‌ဆောက်‌ရေးအဖွဲ့သည် ‌အောက်ပါဥပ‌ဒေကို ပြဌာန်း...
1996-06: The insurance Business Law
The State Law and Order Restoration Council The insurance Business Law (The State law and Order Restorations Council Law No.6/96) The 9th Waxing Day of 1st Waso, 1358 M.E. (24th June, 1996) The State Law and Order Restoration Council hereby enacts the following Law:-...
2012-11-02 – Foreign Investment Law
Foreign Investment Law (2012, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21 ) 3rd Waning of Thadingyut 1374 ME 2nd November, 2012 The Pyidaungsu Hluttaw enacted this law. Chapter (1) Title and Definition 1. This law shall be called the Foreign Investment Law. 2. The words and...
2012-11-02 – နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၁။) ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၃ရက် (၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2011-11-30 – အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းဥပဒေ
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၃။) ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၅ ရက် (၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်သည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) ...